Hetsiky ny polisy sy zandary: sarona ny rongony 50 taonina mahery - ewa.mg
News - Hetsiky ny polisy sy zandary: sarona ny rongony 50 taonina mahery
Toa tsy mahagaga ihany
ny firongatry ny tsy fandriampahalemana, ny heloka bevava, ny
habibiana, ny herisetra… Eny, na ny eny anivon’ny tokatrano sasany
koa aza. Fantatra mantsy fa efa maherin’ny 50 taonina mahery ny
rongony saron’ny mpitandro filaminana (polisy sy zandary) ho an’ny
taona 2020 iny.
Anisan’ny nivoitra tamin’ny tatitry
ny Praiminisitra Ntsay Christian, omaly, ny momba ny hetsika
ataon’ny mpitandro filaminana ny ady atao amin’ny
zava-mahadomelina, tamin’ny taona lasa. Fantatra tamin’izany fa
nahasarona rongony 10.045 kilao niampy 26 gony ary 217
fonosana ny eo anivon’ny polisim-pirenena. Maherin’ny 46.403 kilao
kosa ny zava-mahadomelina tratran’ny zandary, ankoatra ireo
fambolena nopotehina. Miisa 380 ireo nosamborina tamin’izany.
Midika izany fa efa mahatratra hatrany amin’ny 56 taonina any izany
ireo rongony sarona ireo. Tsy ireo ihany anefa fa mbola betsaka ny
fivezivezen’izany any anivon’ny fiarahamonina any fa ireo aloha
izany izao no sarona.
Anisan’ny miteraka disadisa
sy olana eo anivon’ny fiarahamonina sy ny any anivon’ny tokantrano
any ity zava-mahadomelina ity. Mampitombo ny herisetra amin’ny
endriny samihafa : fifamonoana an-kitsirano, adin’ny samy tanora,
fampiasana fitaovana maranitra (antsy, famaky…). Mampirongatra ny
asan-jiolahy na ny dahalo ny fihanak’izany. Mitondra any amin’ny
fanolanana : ray na raikely manolana ny ao an-tokantrano,
hatramin’ny zazakely; ny havana sy ny fianakaviana, na koa eo
anivon’ny mpiray vodirindrina… Tsy mifidy saranga sy taona koa ny
fandraisana izany. Ankizy sy tanora eny anivon’ny sekoly,
hatramin’ny vehivavy sy ny lehilahy lehibe… Mety mampirongatra
izany koa ny olana samihafa iainana : fihibohana, tsy fananana
Mitaky andraikitra amin’ny
Araka izany, tokony hojerena
manokana ny ady atao amin’ity zava-mahadomelina ity. Mety misy ny
tambajotra matanjaka. Hatreny ifotony no tokony hidirana
an-tsehatra, toy ny any amin’ny velaran-tany fambolena izany. Ny
lalam-pirenena izorany sy ifamezivezen’izany. Ireo mpandray ny
ambongadiny sy ny mpitsinjara ary hatramin’ireo mpifoka. Mitaky
andraikitra amin’ny rehetra izany : mpitandro filaminana, ray
aman-dreny, mpanabe, fiangonana, fikambanana, fiaraha-monina ary ny
fanjakana amin’ny ankapobeny.
L’article Hetsiky ny polisy sy zandary: sarona ny rongony 50 taonina mahery a été récupéré chez Newsmada.
Finoana katolika :: Samy manana heviny amin’ny fahatongavan’ ny Papa François ny tsirairay
Afaka iray volana mahery no ho tonga eto Madagasi­kara ny Papa François. Samy manana ny fandraisany amin’ny fahatongavan’ity Rain’ny fiangonana katolika ity ny tsirairay. Ao no milaza fa natokana ho an’ny mpino katolika irery izany fitsidihana masina izany. Misy kosa no miteny fa tombony ho an’ny firenena ny fandalovany eto amintsika. « Tombony lehibe ho an’ny mpino katolika sy ny Malagasy tsy ankanavaka ny fahatongavan’ity Raiamandreny am-panahy ity. Hahazo fahasoavana lehibe ny fiangonana katolika amin’io fitsi­di­hana io. Ho isan’ireo ho tonga amin’ny lamesa lehibe hatao eny Soamandrakizay ny tenako miaraka amin’ny fianakaviako sady efa vita rahateo ny fisoratana anarana », hoy Razafindrafara Elisabeth, renim-pianakaviana monina eny Ankadifotsy, mpino katolika. « Ho ahy manokana aloha dia tsy fantatro loatra ny tena dian’ny Papa eto amintsika satria mahakasika ny katolika kokoa ilay izy. Izaho mahita fa fanavaozana ny finoana sy fanamafisana ny fiombonan’ny fiangonana katolika manerana ny Nosy ity fitsidihana ity satria mitombo ny fiangonana zandriny eto amintsika », hoy kosa ny nambaran-dRakotoarivelo José, raim-pianakaviana, mpino protestanta. Tsiahivina fa efa tamin’ny telopolo taona lasa no nandalo teto Madagasikara ny Papa Joany Paoly II. Raha tsy misy ny fiovana dia higadona eto Madagasikara amin’ny 6 septambra ho avy izao ny Papa François. L’article Finoana katolika :: Samy manana heviny amin’ny fahatongavan’ ny Papa François ny tsirairay est apparu en premier sur AoRaha.